Fitaovana lehibe hanaparitahana ny rindranasa rehetra amin'ny Internet ny fanasarahana ny interface ny mpampiasa anao amin'ny sosona data amin'ny alàlan'ny Application Programming Interface (API). Raha vaovao amin'ny fampandrosoana ianao, dia API tsotra fotsiny ny API. Tahaka ny hidiranao sy hampiasa rindranasa an-tranonkala amin'ny alàlan'ny browser sy andiany fangatahana HTTP, ny fampiharana anao dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny alàlan'ny REST API sy fandaharana. Betsaka ny olona miditra amin'ny programa, izy ireo
Lahatsary: ​​Topi-maso famaranana farany an'ny Microsoft Windows Phone 7
Asabotsy, Septambra 11, 2010 Talata, Septambra 4, 2012 Douglas Karr
Omaly tao amin'ny The Combine, dia nahita ny fampisehoana ampahibemaso voalohany ny kinova farany an'ny Windows Phone an'ny Microsoft 7. Ity misy horonantsary fampisehoana Windows Phone 7. Windows Phone 7 dia manana traikefa miavaka amin'ny mpampiasa tsy toy ny interface interface mahazatra izay mampiditra sary masina, voasakana ny fivezivezena. Koa satria ny rindrambaiko dia azo aorina ao amin'ny .NET sy Silverlight, izay mpandrindra Microsoft rehetra any dia afaka mivoatra ho an'ny telefaona na handefa ireo fampiharana azy ireo ankehitriny
Isika rehetra dia mankahala ny fanipazana ao anaty siny, saingy nifampiresaka tamina olona tao amin'ny Myers-Briggs aho. Tsy niova mihitsy ny valiny tato anatin'ny folo taona lasa, ENTP aho. Ity misy santionany: manome lanja ny fahafahan'izy ireo mampiasa sary an-tsaina sy fanavaozana hiatrehana olana ny ENTPs. Matoky ny fahaizany mamoaka azy ireo amin'ny olana, matetika izy ireo dia manao tsinontsinona ny fiomanana ampy amin'ny toe-javatra misy. Io toetra io, miaraka amin'ny fironany manambany tena